नेपालकै ठूलो सौर्य विद्युत परियोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढ्दै ,आगामी पुस १५ सम्ममा उत्पादन हुने – Mero Mechinagar
नेपालकै ठूलो सौर्य विद्युत परियोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढ्दै ,आगामी पुस १५ सम्ममा उत्पादन हुने
in मुख्य समाचार, राष्ट्रिय, समाज, सूचना / प्रविधि, स्थानीय समाचार
झापा, २६ पुस । सौर्य विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजनासहित दुई वर्ष अघि स्थापना भएको झापा इनर्जी लिमिटेडले झापामा नेपालकै ठूलो सौर्य विद्युत परियोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढाएको छ ।
दश मेगावाट सौर्य विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजनासहित स्थापना भएको झापा इनर्जी लिमिटेडले सोलार प्यानल राख्नका लागि २२ बिघा जग्गा खरिद गरेको छ ।
झापा इनर्जी लिमिटेडको दोश्रो वार्षिक साधारण सभामा कम्पनीका अध्यक्ष एवम् निवत्र्तमान संघीय सांसद् लालबहादुर सावाले शिवसताक्षी नगरपालिका वडा नं. ३ र ४ मा सोलार प्यानल राख्नका लागि प्रति बिगाहा रु. २० लाखका दरले जग्गा खरिद गरिएको बताउनुभयो ।
आयोजनाको कूल लागत रु. ७९ करोड रहेकोमा रु. ६० करोड बैङ्क कर्जामार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिने उनले जानकारी दिए । कम्पनीले रु. एक लाखदेखि माथि जतिसुकै रकम लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्तालाई आह्वान गरेको छ ।
‘झापालीका लागि झापालीद्वारा’ भन्ने उद्घोषका साथ स्थापना भएको झापा इनर्जीको सौर्य विद्युत उत्पादन परियोजनामा मुलुकभित्र रहेका झापाली उद्योगी व्यवसायी र विदेशमा रहेर विभिन्न उद्यम गरिरहेका झापालीहरुको उत्साहजनक लगानी रहेको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक सुभाष भट्टराईले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार आगामी वर्षको पुस १५ सम्ममा परीक्षण उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । व्यावसायिक उत्पादन भने २०७८ पुस मसान्तसम्ममा गर्ने लक्ष्य लिइएको सञ्चालक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
यहाँबाट उत्पादित विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई प्रति युनिट रु. ७.३० का दरले विक्री गर्ने कम्पनीको योजना छ ।
इन्डोनेशियाको राजधानी जाकार्ताबाट उडेको श्रीविजया एयरको विमान वेपत्ता
बुधबारे जेसीजको पद हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न, कार्यकाल उत्कृष्ट बनाउने अध्यक्ष वाग्लेको भनाइ